Tsy naman’ny vita izay hita… | NewsMada
Tsy naman’ny vita izay hita…
Par Taratra sur 07/10/2017
Tena voafehy tokoa sa tsia ny firongatry ny valanaretina pesta amin’izao? Tsy maharaka ny fihazakazaky ny raharaha ny filazan’ny mpitondra. Nambara tamin’ny herinandro, ohatra, fa voafehy ny pesta. Ny faran’ny herinandro ihany, tsy takona afenina fa tsy voafehy akory ny aretina.
Tsy vitan’izany, nony nikoropaka ny amin’ny fisian’ny maty hatrany ny vahoaka: nambaran’ny fanjakana indray fa efa voafehy ny aretina. Nahoana? Satria, hono, efa fantatra ireo faritra misy ny aretina. Antoka ifehezana tanteraka ny aretina ve ny fahalalana izay faritra hoe misy azy?
Antananarivo, Toamasina, Mahajanga … Aiza ho aiza marina ny eto Antananarivo Renivohitra, ohatra. Fokontany aiza avy? Midadasika izany kaominina izany: tsy vita ny manara-maso ny mponina, mandraraka fanafody, mamono voalavo, mampahafantatra ny tokony hatao…
Vao ny eto Antananarivo, Renivohitr’i Madagasikara, ohatra, izay, vao mainka fa ny any ambanivohitra. Tsorina ho voafehy ny aretina rehefa fantatra ny faritra misy azy? Izay izany ny toe-tsaina, fomba fiasa, tetikady afitsoka? Izay fantatra dia naman’ny hita sy vita, na vitan’ny vava…
Nony tena nidina ifotony ny mpitondra ambony, nibaradaka fa mbola sarotra ny milaza hoe efa voafehy ny aretina pesta. Izay ny kitsapatsapa, miseho sy miteny toa inona na haninona. Avy eo, mandiso izany fa vaky bantsilana ny lainga imasom-bahoaka, mibaboka rehefa mijery ifotony.
Tsy mahagaga raha tsy misy fiovana ny fiainam-bahoaka. Tsy misy fijerena ifotony fa heverina sy lazaina ho naman’ny vita tsinona ny tsy fandriampahalemana, ny fahantrana, ny fidangan’ny vidim-piainana… rehefa fantatra izay toerana misy azy? Eny, na izay hoe mety ho antony aza.
Tsy asa mivaingana sy izay vokatr’izany no mampiteny, fa fisehoana ho mandray andraikitra, fahamaizana hamono afo, fampanginana ny mety ho tsikera sy fanomezan-tsiny izay miteny… Izany hatrany ny fomba fiasa? Tsy voafehy aloha ny aretina pesta, na toy inona filazan’ny mpitondra.
Rahoviana vao hahafehy tena sy hahafehy vava tsy mionona amin’ny famonoana afo? Nefa mampieritreritra koa ny fanginan’ny sasany, tsy miteny tsy mivolana amin’izao…